Lionel Messi Oo Markii Toddobaad Ku Guulaystay Billada Ballon d’Or – Heemaal News Network
Weeraryahanka kooxda Paris St-Germain iyo xulka qaranka Argentina, Lionel Messi, ayaa markii toddobaad ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or – oo la siiyo ciyaartoyga kubadda cagta ee ugu wanaagsanaa sannadka.
Messi, oo 34 jir ah ayaa waddankiisa ka caawiyay inuu ku guuleysto tartanka Copa America, oo noqday koobkii ugu horreeyay ee caalami ah oo ciyaartoygan uu helo, waxaana uu dhaliyay 40 gool sanadkan 2021-ka gudihiisa – kuwaasoo 28 ka mid ah uu u dhaliyay Barcelona, 4 uu u dhaliyay Paris St-Germain, halka 8 kalena uu u dhaliyay Argentina.
Weeraryahanka kooxda Bayern Munich iyo xulka qaranka Poland, Robert Lewandowski, ayaa soo galay kaalinta labaad, halka kaalinta saddexaadna uu ku jiray ciyaartoyga khadka dhexe ee kooxda Chelsea iyo waddanka Talyaaniga, Jorginho.
Gool dhaliyaha Real Madrid, Karim Benzema, oo u dhashay Faransiiska ayaa soo galay kaalinta afaraad.
Abaalmarinta Ballon d’Or waxaa u codeeya 180 wariye oo ka kala socda guud ahaan caalamka, inkastoo aan cidna la siinin sanadkii 2020-kii sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee corona.
Intii u dhaxeysay 2008 ilaa 2019, Messi ama Cristiano Ronaldo (oo ku guuleystay shan jeer) midkood ayaa qaadanayay abaalmarintan, marka laga reebo sanadkii 2018-kii oo uu ku guuleystay laacibka khadka dhexe ee xulka Croatia iyo kooxda Real Madrid, Luka Modric.
Messi ayaa billaddan horayba ugu guuleystay wax ka badan ciyaartoyda kale ee kubbadda, guushiisa marka toddobaad ahna waxay imaaneysaa kaddib markii uu abaalmarintan horay usoo qaatay sannadihii 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 iyo 2019.
“Waa arrin aad u wanaagsan inaan halkan joogo mar kale,” ayuu ku yiri khudbad uu ka jeediyay munaasabadda oo lagu qabtay xarunta Theatre du Chatelet ee magaalada Paris.
“Labo sano ka hor waxaan u maleynayay inay ahayd markii ugu dambeysay ee aan helo. Dadku waxay billaabeen inay i weydiiyaan xilliga aan ka fariisanayo kubbadda, balse hadda waxaan joogaa Paris, waana faraxsanahay.
“Kani wuxuu ii yahay sannad khaas ah, maadaama aan sidoo kale helay Copa America,” ayuu yiri Messi.
Lafta Gareen Oo Ku Sii Jeeda Kismaayo Ergana Ka Ah In Madoobe Bilaabo Doorashada